Intuthuko eqhubekayo e-Iceland | Ezezimali Zomnotho
Jose Manuel Vargas placeholder image | | Amandla
I-Iceland inelungelo lokuba yi umnotho wokuqala wamandla ahlanzekile emhlabeni. Umongameli wayo, u-Ólafur Ragnar Grímsson, ungumvikeli oqinile wentuthuko esimeme nomaphi lapho eya khona. Ngale minyaka emibili edlule usevele unikeze izingqungquthela eziningi lapho enza khona iphrojekthi eyenziwa izwe lakhe ngalolu hlobo lwamandla.
Ngandlela thile izama ukukholisa umhlaba ukuthi ukushintshela kwenye amandla kagesi akubizi njengoba kucatshangwa. Sekungamakhulu eminyaka i-Iceland ingenye yamazwe ampofu kakhulu eYurophu. Isizwe esizinikele kwezolimo nokudoba futhi ugesi waso uvela kuma-85% amalahle angenisiwe. Njengamanje, cishe u-100% wamandla kagesi akhiqizwa kusuka emithonjeni evuselelekayo, ikakhulukazi amandla e-geothermal, okusho ukuthuthuka okukhulu kwezomnotho ezweni.
Umongameli wase-Iceland ugcina ukuthi intuthuko esimeme yibhizinisi elinenzuzo. Uqinisekisa ukuthi izinto bezizohluka uma umhlaba ungabona ukuthi ushintsho lwamandla yibhizinisi elizokhokha izinzuzo ezinkulu. Abantu base-Iceland manje bathokozela izinsiza zabo zikagesi nokushisa eshibhe kakhulu.
Akukho okuphathelene nesimo i-Iceland ebinaso eminyakeni emihlanu eyedlule, lapho ibhange layo liwa. Ngale ndlela entsha yezomnotho, izwe lifundise amanye amazwe ase-Europe isifundo esibalulekile sokuthi ungasinda kanjani kulesi simo esibucayi kangaka. Ngenxa yokutshalwa kwemali emandleni ahlanzekile aqale emashumini ambalwa adlule, namuhla i-Iceland inokukhula komnotho ngonyaka ngama-3% kanye nezinga lokungasebenzi elingaphansi kuka-5%. Izindleko zamandla zehle kakhulu, zikhuphula izinga lezomnotho lemindeni.
Lolu shintsho embonini yamandla ludonse nabatshali bezimali bakwamanye amazwe. Ezinye zezinto zokuncibilikisa ezinkulu ze-aluminium nezindawo zokugcina idatha zise-Iceland, ngenxa yenani eliphansi lamandla abo. Muva nje kungenzeka ukuthi sekuvele nokuthi kungenzeka kuthunyelwe ugesi kusuka e-Iceland kuya e-UK ngentambo engaphansi kolwandle. Amanye amazwe aseScandinavia nawo asebenza ekwakhiweni kwenethiwekhi yezintambo ezingaphansi kolwandle ukuze kuthunyelwe amandla avela e-Iceland.
Kepha i-Iceland ayisona nje isibonelo maqondana nentuthuko esimeme, iphinde inikeze enye yezinhlobo zemfundo eziphambili kakhulu eYurophu nasemhlabeni. Futhi konke lokhu kubonga ukuthuthuka kule ndawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Amandla » I-Iceland namandla ahlanzekile
I-Iceland yizwe elinezakhamizi ezingama-323.000 elinemithombo emikhulu ngamandla e-geothermal. Lokhu kulula kakhulu. Ngeke isetshenziswe njengesibonelo emazweni anabantu abangamashumi ezigidi nezinsizakusebenza ezimbalwa kakhulu zamandla.
Ngithengisa wonke amasheya ami e-Endesa
Izinkinga zezomnotho zaseFrance noFrançois Hollande